Famerenana horonan-tsary: ​​Tranga fitendry ZAGG portfolio | Vaovao IPhone
Raha mitady tranga tsara ianao izay miaro ny iPad amin'ny rotsakorana, ny fipoahana ary ny gorodona, fa misy keyboard koa, ZAGG portfolio io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra ankehitriny. Voalohany indrindra, ny ZAGG dia mamela antsika hanamboatra ny tsipiriany rehetra amin'ny tranga ary tsy izany ihany fa manolotra ny mpanjifa hisafidy ny loko fitendry.
Ny tranga tsirairay dia misy kitendry izay ampifandraisintsika amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Amin'ny famenoana ny kitendry indray mandeha amin'ny alàlan'ny port USB, dia hanana bateria mandritra ny volana maromaro isika. Noho ny famolavolana ny raharaha ZAGG dia ho afaka hampiasa ny izahay iPad amin'ny toerana rehetra ary soraty milamina. Ny kitendry dia misy lakilà hitsin-dàlana maromaro hanovana fiteny, na hampiakarana na hidina, hilalaovana mozika, ary koa hanapaka / handika ary hametaka lahatsoratra. Izy io koa dia mamela anao hiverina haingana amin'ny efijery iPad lehibe.
ZAGG portfolio dia mifanaraka amin'ny iPad 2 sy ny iPad vaovao ary misy ao Amazon (Etazonia) 65 euro. Azonao atao koa ny mahita an'io ao Amazon Spain ho an'ny 99,99 euro. Misaotra izahay AT & T fa nomenao anay ity fanampin-javatra ity ho an'ny hevitrao.
Pejy- ZAGG | Amazon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Famerenana horonantsary: ​​ZAGG portfolio Keyboard Case
Tany-tany dia hoy izy:
Mampalahelo tokoa izany, satria efa nanandrana nividy azy aho saingy tsy namela ahy hatramin'ny nipetrahako tany Espana.
Mamaly an'i Cat-Land
Nividy maromaro aho
Te hilaza aho fa nividy mpiaro ny efijery ho an'ny iPhone sy fitaovana hafa mivantana avy tany Zagg imbetsaka ary tsy nanana olana velively aho tany Espana.
Tsy fantatro raha hisy ny politika manokana momba ny fandefasana ity lahatsoratra manokana ity.
carlosmusicien dia hoy izy:
Taiza no nanaovanao izany ary tamin'ny fomba ahoana? Mendrika? MISAOTRA
Mamaly an'i carlosmusicien
Nanampy rohy mankany amin'ny fivarotana Amazon any Espana aho, ny zava-mitranga dia miakatra bebe kokoa amin'ny vidiny.
Carlosrola1990 dia hoy izy:
Izay ahafahanao mividy azy amin'ny loko hafa sy ampahan'ny Amazon (manome ny safidy amin'ny mainty fotsiny). Ao amin'ny pejy zagg.com dia manome olana ary tsy tratra ho an'i Espana.
Valiny tamin'i Carlosrola1990
Jean Py Music ♥ ️ dia hoy izy:
Mba hametrahana accents dia tsindrio ny fanalahidy misy ireto famantarana roa ireto ~ `ary avy eo ny zanatsoratra mba hampiasaina, ary ny fahazoako izay ataoko dia ny fanindriana ny fanalahidy Shift + ny lakile manana ~` ary avy eo ny litera ny lasa N
Mamaly an'i Jean Py Music ♥ ️
tsara ny lohahevitry ny taratasy Ñ tsy tonga amin'ny klavier marina ??? Azonao atao ve ny milaza amiko hoe ahoana izany? Ary raha manelingelina izany? a saudo
Rehefa manova ny fitendry amin'ny Espaniôla dia hita eo amin'ny toerany mahazatra ny 'ñ'. Mora ampiasaina raha zatra manoritra nefa tsy mijery ny fitendry
Midika izany fa hitranga ny fanaovana ny lakilen'ny ankavanan'ny L, ilay misy tsimokaretina sy tsatokatony, tsia? Ary tsy mila fitambarana fototra hahazoana ilay Ñ marina? Ny fanindriana ny fanalahidy voalaza fotsiny dia hivoaka ilay Ñ, tsia?
Ary raha ny amin'ireo fanalahidy hafa, tsy dia misy tsy itovizany amin'ny fitendry Espaniola ve, ohatra, ny fametrahana accents sy zavatra hafa? Misaotra betsaka noho ny valinteninao haingana. Heveriko fa io no iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena.
Izany tokoa no fiasany. Averina indray, raha afaka mijery fotsiny ianao amin'ny fijerena ny efijery, dia tsy hahita olana ianao. Mora be ny mampiasa azy 😉 Alao antoka fotsiny fa manana ny kitendry napetrakao amin'ny Espaniôla amin'ny iPad ianao.
Omar nava dia hoy izy:
Salama, tsara ny andro, avy any Mexico aho ary mamorona configurement tsara amin'ny fomba hafa aho, tsy haiko ny manamboatra azy hametrahana _ @ ñ, sy ny hafa, raha misy olona afaka manoro hevitra ahy dia tiako ilay izy (Y)
Valiny tamin'i Omar Nava
Tutorial: ny fomba fametrahana Cydia amin'ny iOS 6